Ukuthumela - i-Buddhatrends
Sithumela umhlaba wonke eNyakatho neMzantsi Melika, eYurophu, e-Asia, e-Afrika, e-Oceania, nangaphezulu. Sisebenzisa iinkonzo ezinkulu, ezithembekileyo zokuthutha amazwe ukuqinisekisa ukuba iphakheji yakho ifika kwindawo oya kuyo ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo.
INDLELA NGOKUBA IYAQALA NGANJE UKUPHATHWA KWEENKQUBO?
Amanqaku ngokuqhelekileyo athatha iintsuku ze-7 ukuqhuba phambi kokuba athumele-ngaphandle kweeveki neeeholide. Ngexesha leeholide ukucwangcisa amaxesha kunokuthatha kwii-14 iintsuku.
INDLELA YOKUPHATHA KWIXESHA?
Imiyalelo yase-US iya kuthunyelwa nge-e-packet kunye nee-Orders zamazwe ngamazwe ziya kuthunyelwa ngokuxhomekeke ekuzalisekeni kwisiko esivela kuyo.
Ixesha leThuthi ukuya eUnited States: I-12 - ii-20 zeentsuku zeentsuku
Amaxesha okudluliselwa kwiizwe ngamazwe: ii-10 - ii-21 zeentsuku zoshishino
Iimitha zemizuzu yezothutho ziyafumaneka kwiiveki ze-3.
Kukho iimeko ezingenakulawulwa (iintlekele zemvelo, iholide, imozulu, njl.) Ezinokubangela ukuhlehliswa kwempahla. Nangona iipakheji ezininzi ziza kufika ngexesha, kunokubakho iimeko kunye nokulibaziseka ukuba abaphathi bethu bafumane amava. Ngenxa yesi sizathu, asiqinisekisi ixesha elifanelekileyo lokuhambisa; umrhumo wokuhanjiswa ngumthwalo wenkampani yokuthumela.
YINTONI INKOSI EYA KUVENZISWA NGOKUSEBENZISWA?
I-courier service ngokwenene incike kwiziko lethu lokuzaliseka. Oku kungenxa yokuba umkhiqizo wethu unxweme kumazwe ahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba ufumene intengo efanelekileyo. Iinkonzo ze-Courier ziyahlukahluka kwilizwe elizweni. Ngaphandle kwesiseko esomeleleyo seshishini kunye nenkonzo ye-courier, asikwazi ukufumana amaxabiso angancinci ngaloo ndlela siza kulahleka kwiimarike zehlabathi ezifana ne-Amazon kunye njalo.
Nangona kunjalo, siya kuqinisekisa ukuba ufumene iphakheji yakho kwaye unike inkxaso yomshuwalense kwiphakheji yakho kwimeko yokulahleka kunye nelahleko
NDIQONDE OKUNYE OKUNYE KWI-1 ITEM, KUNYE NDIMELE NGEMVA KWEMINYE, KUNGANI NOKUBA?
Senza konke okusemandleni ethu ukunciphisa iindleko ekupheliseni kwakho ukuze ungahlawuli iirhafu / iipresimesi eziphezulu ukufumana izinto zakho. Ukuba ubeka umyalelo kunye nathi kwizinto ezininzi kunokuba mhlawumbi ziya kuthunyelwa kwiphakheji enye. Nceda vumela ixesha lokuba zonke izinto zakho zifike.
INGABA NDIFANELE UKHLAWULA IIMALI EZIFUNDAYO OKANYE I-TAX YOMSEBENZI KWI-PRODUCTS?
Amaxabiso abonakaliswe kwi-receipt yakhounako hlukile kwizinto oyalele kodwa nceda ungakhathazeki. Ngokuqhelekileyo esi sikolo esizalisekileyo siya kwenza ntoni ukuphawula njengamaxabiso aphantsi kakhulu okanye ukuphawula izinto njengezipho ngokupheleleyo. Oku kukuthintela iintlawulo / iintlawulo zokungenisa iintengiso ezithe zenziwa ekupheleni kwakho kumazwe athile ezi ntlawulo zongeziweyo zibiza kakhulu.
NDIQHELELE UMTHETHO KANYE Andizange Ndiwamukele UKUBHALISWA KWEMAIL ... KUYA KUTHINI?
Nceda uqinisekise ukuba i-imeyile yakho ilungile xa ubeka umyalelo. Kucelwa uqaphele ifowuni yakho ye-SPAM ukubona ukuba i-imeyile yakho yokuqinisekisa ithunyelwe apho. Ukuba akukho i-imeyile yokuqinisekisa, nceda uthumele i-imeyili lethu iqela lokuxhasa ngokusebenzisa ifom yoqhagamshelwano kwisayithi lethu
YINTONI UKUBA NDINGIYE EKHAYA NGOKUKHULULELA?
Nabani na ekhaya angayifumana iphakheji egameni lomthengi. Ngokuqhelekileyo, umthumeli uya kushiya isiliphu sokuqokelela ukuba akukho mntu uhlala ekhaya kwaye unokuqokelela ipelsela yakho kwipostile efuphi nawe.
Ndifuna ukutshintsha INDLELA YAMANDLA / I-ADDRESS, UNGAKUYA?
Nangona sikhuthaza kakhulu ukuba uhlolisise ubungakanani kunye needesi phambi kokubeka umyalelo kunye nathi, siyaqonda ngokucacileyo ukuba izinto ziyavela kwaye iimpazamo zenziwa. Senza i-oda ngomhla omnye ofanayo. Ukuba utshintsho kufuneka lenziwe kwikhowudi yakho nceda uqhagamshelane nathi kwifom yoqhagamshelwano kwisayithi lethu ASAP kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba senze olo tshintsho, KANYE asikwazi ukwenza naluphi na izithembiso. Ukuba le nto (e) isetyenziswe kakade kwisiseko sethu sokuzaliseka asikwazi ukwenza utshintsho kwimiyalelo. Kwimeko enjalo, ungathumela loo nto kwi-Warehouse yeSithili esondeleyo kwaye emva kokufunyanwa singakwazi ukuthumela into echanekileyo. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze ufumane ukuba yiyiphi indawo yokugcina indawo yasekuhlaleni evela kwilizwe lakho.
NDIYE UMBUZO NGEMISEBENZI YAMANYE OKANYE NGAKHO UKUBA UKUBA UYAPHENDULWA LAPHO, NDIYA KUFUNA NJANI?
Nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo yakho!